RW Rooble iyo Midowga Musharaxiinta ayaa mar kale ku kulmaya magaalada Mogadishu… – Hagaag.com
RW Rooble iyo Midowga Musharaxiinta ayaa mar kale ku kulmaya magaalada Mogadishu…
Posted on 1 Maarso 2021 by Admin in National // 0 Comments
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble iyo Midowga Musharaxiinta ayaa maanta Magaalada Muqdisho ku yeelanaya kulankoodii 2aad, ee looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Labada dhinac ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan Hotel Decale oo ku dhex yaala Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, waana halkii ay Khamiistii ku kulmeen.
Kulanka ayaa la filayaa in looga hadlo sii wadidda wadahadalada, khilaafka raggaadiyay doorashooyinka dalka iyo sidii Midowga Musharaxiinta ay qayb uga noqon lahaayen shirka wadatashiga qaran, ee weli hakadka ku jira.
Wararka ayaa sheegaya in kulanka lagu kala warqaadan doono natiijada macluumaadka ay soo uruuriyeen guddigii wadajirka, ee loo xil saaray in baaritaanka ku soo sameeyaan dhacdadii 19-kii February, inkastoo ay suurtagal tahay inaanan kulankan lagu soo bandhigin xogtaasi.
Sidoo kale kulanka ayaa la filayaa in lagu soo hadalqaado bannaanbaxa lagu heshiiyay in toban cisho gudahood kaga qabsoomo Magaalada Muqdisho.
Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha iyo Midowga Musharaxiinta ayaa sii wadi doono wadahadalada, illaa iyo inta ay ka meelmarayaan qodobadii horaan lagu heshiiyay.
Geba-gabada kulanka ayaa waxaa suurtagal ah in Ra’iisal Wasaare Rooble uu Maamulada Jubbaland iyo Puntland ugu yeero ka soo qaybgalka shirka wadatashiga qaran, ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Beesha Caalamka ayaa boggaadisay dadaalada uu Rooble xalka ugu raadinayo caqabadaha ku horgudban hannaanka geedi-socodka ee doorashooyinka dalka.